Baytariyada LiPo: siraha baytariyadaan lithium | Qalabka bilaashka ah
Baytariyada LiPo: siraha baytariyadaan lithium
Waxaa jira baytariyaal badan sida aad horeyba ugu baratay maqaalka ku saabsan batteriga CR2032. Sidoo kale waa inaad horeyba u ogaataa inay jiraan qaybo loogu talagalay Arduino sida kuwa TP4056 taas oo gaar u ah buuxinta baytariyada. Hadda, maqaalkan cusub waxaad ku baran doontaa wax badan oo ku saabsan Baytariyada LiPo. Taasi waa, nooc gaar ah oo batari lithium ah oo sumcad badan ku helaya suuqa oo ay weheliso Li-Ion.
Waxaan sidoo kale kugula talinayaa inaad fiiriso maqaalka isaga ku saabsan IMAX B6 xeedho batari, waxaa ku qoray qayb ku saabsan noocyada baytariyada, unugyada iyo kuwa soo urursada tamarta korantada, oo ay ku kala duwan yihiin kuwa ugu muhiimsan, faa'iidooyinkeeda iyo faa'iido darradeeda. Taasi waxay kaa caawin kartaa inaad fahanto waxa looga hadlayo halkan ku saabsan baytariyada LiPo.
1 Hordhaca Lithium
2 Baytariyada Lithium
2.1 LiPo vs baytariyada Li-Ion
2.2 Talooyin ku saabsan daryeelka baytariyada lithium
3 Iibso batariyada LiPo ee mashaariicdaada
El lithium (Li) waa cunsur ka mid ah miisaska xilliyada ee u dhigma biraha alkali-ka-cad-cad. Waa mid aad u ololi kara, dabacsan oo aad u fudud (in ka badan aluminium). Si dhakhso leh ayuu u xaalufaa markii uu taabto oksijiinka hawada ku jira, mana ku jiro xaalad xor ah oo dabiici ah. Sababtaas awgeed, waa in laga shaqeeyaa ka dib xulashada miinooyinka.
Ma aha bir dhif ahMaaddaama 65 qaybood oo ka mid ah 1.000.000 ee qolofta Dhulka ay tahay lithium. Laakiin maalmahan waxay noqotay mid aad u qaali ah, sida ku dhacda macdanta loo yaqaan 'coltan mineral', taas oo ay ugu wacan tahay codsiyadeeda ku aaddan warshadaha teknolojiyadda, inta badanna laga sameeyo baytariyada.
El lithium sidoo kale laguma quusin karo biyaha, maadaama markii lagu dhex daro ay falcelin karto oo guban karto, sida ku dhacda Na. Sidaa darteed, markay taabato maqaarka, waxay sababi kartaa dhaawacyo, maadaama dhidid ama qoyaan ka soo baxa maqaarku ay dhalin karaan gubashadan. Sababta oo dhan ee soo saareyaasha bateriga si loo hubiyo inay si fiican u ilaalinayaan si looga fogaado shilalka suurtagalka ah.
Sidaan horeyba u iri, mid ka mid ah codsiyada waaweyn ee lithium ayaa ah baytariyada. Labadaba gawaarida korantada badan sida gawaarida F1, iyo sidoo kale qeybta elektarooniga (taleefannada gacanta, kiniiniyada, laptops, ...). Waa run oo horay looma isticmaalin, maadaama ay ahaayeen noocyo kale oo baytariyaal ah oo lagu soo rogay suuqa.
Laakiin markii la ogaado sifooyinka lithium, sida lacagtiisa degdegga ah, dhibaatooyinka dayaca ee saamaynta xusuusta laga baqo iyo cimriga, cufnaanta cufnaanta (baytariyada yar yar iyo ka awood badan), iwm, ayaa goor dhow ka dhigay nooca baytariyada ugu badan.
Gudaha baytariyada lithium-ka waxaa ku jira qoysaska kala duwan kuwa kale, inkasta oo muddooyinkii u dambeeyay ay tijaabinayaan dhinacyo kale oo qalaad. Noocyadaasi waa:
Cobalt lithium oxide- Waxay leeyihiin cufnaan xagga tamarta oo aad u adkeysi badan, laakiin waxay soo bandhigi karaan walaacyo xagga nabadgelyada ah.
Xabagta Lithium-magnesium: Aad ayey u badbaado badan yihiin, laakiin waxqabadkooda iyo waxtarkoodu had iyo goor ma fiicna, gaar ahaan heerkulka sarreeya.
Laydhka birta ah ee loo yaqaan 'Lithium iron phosphate': waa mid kale oo ka mid ah kuwa ugu fiican xagga nabadgelyada iyo cimri dhererka dheer, oo taageeraya in ka badan 2000 wareegyo lacag-bixin ah.
Li-ion: waa baytariyada lithium-ka dib loo soo celin karo waxayna leeyihiin naqshad dhismeedka cylindrical ama tubular ah. Waxay leeyihiin cufnaan wanaagsan, adkeysi iyo badbaado.
lipo: Baytariyada LiPo waa kuwa aan xiisaha u qabno qodobkaan, waana siman yihiin. Sidoo kale waa la soo celin karaa oo waxay leeyihiin astaamo la mid ah Li-Ion.
Kuwa aad inta badan maqashay, maxaa yeelay waa kuwa ugu fiican, waa Li-Ion iyo LiPo. Taasi waxay leedahay qaar khilaafaadka xusida mudan...
LiPo vs baytariyada Li-Ion
Sidii aan idhi, baytariyada LiPo iyo Li-Ions siyaabo badan ayey iskaga mid yihiin. Kaliya maahan inay u isticmaalaan lithium aasaas aasaasi ah, waxay sidoo kale leeyihiin cimri dheer oo cadaalad ah. Uguyaraan waxay kudhowaad 1000 wareeg oo dheecaan iyo dheecaan ah, inkasta oo ay badanaa yihiin 500 wareeg oo aan la marin isbadalo muuqda oo ku saabsan waxqabadkooda.
Dhinaca kale, labaduba waxay leeyihiin cufnaanta wanaagsan, Batariyaal aad u awood badan oo karti badan ayaa lagu abuuri karaa culeys iyo cabir dhimis leh. Taasi waa sababta loogu soo rogay qalabka moobiilka.
Ugu dambeyntiina, labaduba waxay wadaagaan wax xun. Taasina waa amnigooda, tan iyo markii ay heleen khatarta gubashada sida lagu arkay moobiillada qaarkood oo si liidata loo qaabeeyey. Si looga fogaado dhibaatooyinka, waa inaysan sidoo kale la kulmin heerkulka sare.
Sida for farqiga u dhexeeya LiPo iyo Li-Ion:
Li-ion: waxay isticmaalaan elektrolis milix ah oo milix ah oo ku jirta dareeraha dareeraha ah (dareeraha), kaas oo noqon doona midka bixiya ion-yada lagama maarmaanka u ah inay ku kala wareegaan inta u dhexeysa cathode iyo anode inta lagu jiro dheecaanka. Tani waa sida farqiga suurtagalka ah loo abuuro si looga dhigo aaladaha ku xiran inay shaqeeyaan. By the way, marka laga hadlayo lacag bixinta, howsha waa la rogay oo ion-yada ayaa ka guuraya anode una socda cathode.
lipo- Milixda lithium-ka waxay ku jirtaa jel (badanaa polymer), taas oo yareynaysa suurtagalnimada daadinta. Waxay u muuqdaan kuwo xoogaa jilicsan, sidaa darteed waxay xiiso u yihiin moodooyinka qaabdhismeeya. Dhibaatadu waxay tahay inay ka olol badan yihiin Li-Ion.
A Heerka Isticmaalaha, ma heli doontid wax farqi ah. Waxaad arki doontaa waxqabad la mid ah, awoodaha, iyo astaamaha jirka.
Talooyin ku saabsan daryeelka baytariyada lithium
Baytariyada LiPo, sida baytariyada Li-Ion, waxoogaa ayay sii shaqeeyaan sidaan horayba u soo sheegay, laakiin taasi macnaheedu maaha inaadan daryeelin. Si aad uga dhigato inay sii dheeraadaan, waad raaci kartaa kuwan talooyin aad u fudud:
Had iyo jeer bateriga sii buuxi markii aad u baahato. Waa in laga saaraa qalabka ku jira hadday suurogal tahay ama ugu yaraan la demiyo qalabka adeegsanaya.
Udejinta batteriga illaa xadka ma aha ikhtiyaarka ugu fiican kiisaskaas.
Uma baahnid inaad sugto illaa ay tahay 100% si aad uga saarto xeedho oo aad u isticmaasho haddii aad u baahato. Saamaynta xusuusta halkan waa yar tahay.
Ha ku dhejin batteriga heerkulka sare, maadaama ay taasi si aad ah uga sii darayso iyaga.
Waa inaadan u isticmaalin xeedhooyinka lacag-ku-shub deg deg ah. Tiknoolajiyaddani waa mid dhakhso badan oo wax ku ool ah, laakiin iyada oo lagu dhejiyo walaac weyn sababtoo ah xaddiga culeyska, noloshooda waxtarka leh ayaa hoos u dhacday.
Haddii aad batteriga keydin doontid waqti dheer adigoon isticmaalin (dhowr bilood), markaa waa inaad hubisaa in laga soo dalacay ugu yaraan 40% ama ka badan.
Waa suurtagal in la'aanta isticmaalka filimka Koloraydh Lithium lagu arki karaa tiirka saxda ah ee batteriga. In kasta oo ay tani caqabad ku tahay wareegga korantada, ma aha mid aad u daran, waxaa lagu tirtiraa isticmaalka.
Iibso batariyada LiPo ee mashaariicdaada
Haddii aad ka fekereyso inaad hesho batari LiPo ah si aad u xoojiso mashaariicdaada, waa inaad ogaataa inaad ku heli karto qaabab kala duwan iyo qaabab kala duwan astaamaha farsamada. Marka lagu daro danabka iyo xoojinta ay bixin karto, xogta ugu muhiimsan waa awooddeeda.
La awoodda baytariyadaas waxaa lagu cabiraa mAh, taas oo ah, qadarka mA saacadiiba oo ay bixin karaan. Tusaale ahaan, batari 1000 mAh ah ayaa bixin kara 1000mA hal saac. Laakiin sidoo kale waxay tusaale ahaan u keeni kartaa 2A nus saac, ama socon kartaa 4 saacadood oo keenaya 0.5A. Muddadu waxay ku xirnaan doontaa qiimayaashan ...
Waa inaad falanqeysaa baahida tamarta ee mashaariicdaada oo aad markaa go'aamisaa awoodda aad u baahan tahay. Waa kuwan tusaalooyin ka mid ah alaabta aad iibsan karto on Amazon:
1550mAh 14.8V LiPo baytariga
2200mAh 11.1V LiPo baytariga
5000mAh 14,8V batari
8000mAh 7.4V batari
Xusuusnow in danab ma aha waxa ugu muhiimsan, maaddaama aad adeegsan karto jaangooyooyin si aad ula jaanqaadi karto waxa aad u baahan tahay ...
Wadada buuxda ee maqaalka: Qalabka bilaashka ah » Qaybaha elektarooniga ah » Baytariyada LiPo: siraha baytariyadaan lithium